အမေရိကန်အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂတွင် ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မှု ဖြည့်သွင်းရန် တရုတ် တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်သင့်ကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂတွင် ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းသင့်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်အတွက် ကတိကဝတ်အတိုင်း ပြုမူဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျောက်လိကျန်းက မေ ၁၃ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂမှ မေလတွင် ထုတ်ပြန်သော နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များအရ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂ၏ ပုံမှန်ဘတ်ဂျက်အတွက် ထည့်ဝင်ရမည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်နှင့် ငြိမ်းချမ်းထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ထည့်ဝင်ရန် သတ်မှတ်ငွေအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံကျော် ပေးဆောင်ရန် အကြွေးကျန်ရှိနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နေ့စဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ မေးမြန်းမှုအား ကျောက်က တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကြီးဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူများအနက် တစ်နိုင်ငံအဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ ပုံမှန်လည်ပတ်ရန် အပြည့်အဝထည့်ဝင်ကူညီခြင်း ရှိမရှိ ကျောက်က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုသည် အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံတကာ တာဝန်ဝတ္တရားများအား ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝါဒကို ကျင့်သုံးရန် အရေးပါသောနည်းလမ်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း ကျောက်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းက ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ရန် များပြားသောပမာဏ အမြဲတစေပေးအပ်ရန်ကျန်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
“မကြာသေးမီနှစ်များက စုစုပေါင်း မထည့်ဝင်ရသေးသည့် ရန်ပုံငွေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ပေးသွင်းဖို့ မကြာခဏကျန်ရှိနေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု ထည့်ဝင်ငွေအတွက်လည်း အမေရိကန်က နှစ်ပေါင်းမျာစွာ ပမာဏအကြီးမားဆုံး ပေးဆောင်ဖို့ မကြာခဏကျန်ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၃၇၈ ဘီလီယံအထိတောင် ပေးဖို့ကျန်ရှိနေပြီး အဲဒီပမာဏက ထည့်ဝင်ဖို့ ကျန်ရှိနေတဲ့ပမာဏရဲ့ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်” ဟု ကျောက်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံကမူ ဘိုင်ဒန်အစိုးရက “နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝါဒသို့ ပြန်လှည့်ရေး” ကတိပြုထားကြောင်းနှင့် “ဥပဒေများအခြေခံထားသော နိုင်ငံတကာအမိန့်” ကို ကာကွယ်ရန် ပြောကြားခဲ့သလို ကုလသမဂ္ဂ ဘတ်ဂျက်အတွက် ကြီးမားသော ကြွေးကျန်ပမာဏကို ပေးဆောင်ရန် ငြင်းဆိုထားကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောခဲ့သည်။
“ဒါကို အမေရိကန်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာလဲ။ ပုံမှန်ဘတ်ဂျက်နဲ့ ထည့်ဝင်ငွေတွေရဲ့ ပမာဏများပြားလှတဲ့ သူ့ရဲ့ကြွေးကျန်တွေကို ပေးရမယ့်အစား အမေရိကန်ဟာ သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့၊ ကုလသမဂ္ဂကို ဖိအားပေးဖို့နဲ့ အခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဆီကို တာဝန်လွှဲချဖို့ စတာတွေမှာ ငွေကြေးကိုသုံးစွဲနေတယ်။ အမေရိကန်က ဘယ်ဥပဒေတွေနဲ့ ကစားနေတာလဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက ၎င်းတို့ပေးဆောင်ရမည့် ငွေကြေးထည့်ဝင်မှု နောက်ဆုံးရက်များကို လွဲချော်လျက်ရှိကြောင်း၊ စစ်ပွဲဆင်နွှဲခြင်း၊ လက်နက်များလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို မီးလောင်ရာလေပင့်လုပ်ခြင်း စသည်တို့အတွက် သုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်း ကျောက်က ပြောခဲ့သည်။
“ဒါဟာ အမေရိကန်က နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝါဒကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကာကွယ်နေတာလဲ။ ဒါဟာ အမေရိကန် စံနှုန်းနဲ့ ဥပဒေအခြေပြု နိုင်ငံတကာအမိန့်တွေကို ကာကွယ်နေတာလား” ဟု ၎င်းက မေးမြန်းခဲ့သည်။
“အမေရိကန်ဟာ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို ထမ်းဆောင်တာ၊ ထည့်ဝင်ရမယ့်ငွေကြေးတွေကို အချိန်မီ အပြည့်အဝပေးဖို့၊ ကြွေးကျန်တွေကို ပေးဖို့၊ ကုလသမဂ္ဂကို ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုတွေ ဖြည့်ဆည်းရေးလုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကတိကဝတ်အတိုင်း ပြုမူဖို့ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
BEIJING, May 13 (Xinhua) — The United States should shoulder responsibilities, take the lead in fulfilling its financial obligations to the UN, and act upon its commitment to multilateralism, Chinese foreign ministry spokesperson Zhao Lijian said Friday.
Zhao made the remarks atadaily press briefing in response toaquery that the U.S. has owed more than one billion U.S. dollars of dues for the UN’s regular budget and over 1.4 billion dollars of peacekeeping assessment according to the latest data released by the UN in May.
Zhao said that as one of the UN’s founding members and the largest contributor, whether the U.S. has paid its full assessed contributions matters to the normal operation of the UN.
“In recent years, it often owes up to one billion dollars, accounting for 60 percent or 70 percent of the total unpaid dues. In terms of peacekeeping assessment, the U.S. often owes the largest share of contributions for years. In 2019, it owed as much as 2.378 billion dollars, accounting for 66 percent of the total unpaid assessment,” Zhao said.
The United States refused to pay its huge arrears of UN budget while the Biden administration promised “a return to multilateralism” and claimed to defenda“rules-based international order,” the spokesperson said.
“How would the U.S. respond to this? Instead of paying its huge arrears of regular budget and assessment, the U.S. has been using financial means to fulfill its political agenda, pressure the UN and shift responsibilities to other UN member states. By what rules is the U.S. playing?” he said.
“Is this how the U.S. defines defending multilateralism? Is this defending ‘rules-based international order’ by the U.S. standard?” he asked.
“The U.S. should shoulder responsibilities, pay its assessments in full and on time, make up for the arrears, take the lead in fulfilling its financial obligations to the UN, and act upon its commitment to multilateralism,” he said. ■